Waa kuma Dr Garry Miller oo ahaa baadari masiixi ahaa | shumis.net
Home » islam » Waa kuma Dr Garry Miller oo ahaa baadari masiixi ahaa
Waa kuma Dr Garry Miller oo ahaa baadari masiixi ahaa
Dr Gary Miller waxaa uu aad iyo aad u xiiseeyaa cilmiga sayniska iyo weliba xisaabaadka. Waa xisaabyahan aad u baara oo u dabagala wax walba oo caqliga geli kara ( logics). Dhalashadiisu waa reer Kanada, waxaana uu wakhti dheer ka mid ahaa wadaadada fidiya diinta masiixiga. Waxaa uu ahaa nin aad ugu xiran kaniisadaha.
Dr Gary Miller intaas kuma aanu qancin ee waxaa uu sii watay baaritaankii uu quraanka ku hayey isagoo mar walba rajeynaayey inuu waxuun qalad ah mar uun ka heli doono. Akhriskii quraanka ayuu sii kordhiyey, waxaana uu bilaabay inuu sii dhexgalo oo uu dhuuxo ayaadka quraanka ah. Waxaa uu yaab iyo amakaag la kulmay kolkii uu akhriyey suuratul nisaa, aayada 82′ aad. aayadaas ayaa leh: ” Miyaaney fiir-fiirineynin quraanka haddii uu ka yimd meel aan eebe agtiisa ahayn , waxaa ay ka heli lahaayeen dhexdiisa is khilaaf badan”
Title: Waa kuma Dr Garry Miller oo ahaa baadari masiixi ahaa
Posted by Unknown, Published at October 12, 2016 and have 0 comments